သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေ Rework ဘူတာ -> BGA Rework ဘူတာ
ကျနော်တို့ထောက်ပံ့, ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်စေ့စပ်နှင့်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပါပြီ BGA Rework ဘူတာ အတူတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိထုတ်ကုန်များအပြင်, ငါတို့သည်လည်းပြီးစီးသည်စိတ်ကြိုက်အမိန့်လက်ခံပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်အနေနဲ့နိုင်ငံခြားက countries.Therefore တလျှောက်လုံးကောင်းကောင်းမသွားကြပြီ, ငါတို့ရှေ့သို့တင်ပြဆွေးနွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် constantly.We ရေရှည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုထူထေ​​ာင်ရန်ဆန္ဒရှိအသစ်တီထွင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဆက်လက်။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်မဆိုစိတ်ဝင်စားပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
SMD / BGA Rework ဘူတာ
1. Microcomputer ထိန်းချုပ်မှု, ပူနွေးလာ-up ကအလျင်အမြန်။
2. IR860 ယနေ့အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, နည်းပညာရှင်, ဝန်ဆောင်မှု / ပြုပြင်စုဝေး rework ၏တောင်းဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်ပူလေကြောင်း SMD rework ဘူတာရုံ။ အဆိုပါစနစ် SMD စုဝေးပြုပြင်သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ပေမယ့် "Hot Air လေကြောင်းလိုင်း IR860" သာလွန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စစ်ဆင်ရေး၏လွယ်ကူနှင့် ပူးပေါင်း. အရည်အသွေးစံနှုန်းသစ်တခုရရှိမသာ။
3. ဒီဂဟေ rework ဘူတာရုံအလွန်အမင်းလေထုစီးဆင်းမှုနှင့်အပူချိန်ထိန်းညှိကြလိမ့်မည်။ ထိုဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် descaling နှစ်ဦးစလုံးအတူတူ nozzle နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရမည်။
static နဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားကွဲပြားခြားနား ICS ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်မှထုတ်ပြန်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ၎င်းဒြပ်စင်များနှင့်စစ်ဆင်ရေးမှပိုပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေးထားပါတယ်။
4. ပါဝါပိတ်ထားပြီးနောက်အလိုအလျောက်အအေးခံစနစ်ကပဲအပူဒြပ်စင်များနှင့်လက်ကိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်ဖို့, လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
5. ကျွန်တော် SOP ICS ၏သွပ်ရည်စိမ်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်သက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့်ကတယ်လီစကုပ်ရေပိုက်သည်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
နု၏​​ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့, အသုံးပြုခြင်းနှင့် ရရှိ. လှပတဲ့ထိုဒြပ်စင်အတွက် nozzle အောင်ထားပါ။
6. ကယ့်ကိုခဲ-အခမဲ့ဂဟေနှင့် desoldering ရရှိရာလျင်မြန်စွာအပူတက်, Airflow ၏ပမာဏကြောင့်ထိခိုက်ခံရမပါဘဲတိကျမှန်ကန်နှင့်တည်ငြိမ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, ထောက်ပြကြပါတယ်။
7. သည့်အခါအပူသို့မဟုတ်အအေးပုံပျက်သောအနေဖြင့် PCB တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ PCB positioning ကိုတစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကရိယာတပ်ဆင်ထားတစ် V-ထိုးသုံးပါနှင့် BGA ချစ်ပ်မဆိုအရွယ်အစား rework နိုင်ပါတယ်။
ဦးဆောင်-အခမဲ့ PCB ဘုတ်အဖွဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးသဖြင့် BGA, SMD အစိတ်အပိုင်းများ, PCB ဘုတ်အဖွဲ့အပါအဝင်အဘို့, အပူ, အခဲအပေါ်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။
power ခဲ့သည် Rating
220-240Vac က 50 Hz
T3.15A (အနှေး Type)
T2A (အနှေး Type)
FUSE (Delay အမျိုးအစား)
T က 10
T က 5
IR မီးခွက်သည် Temp ။ အကွာအဝေး
အချိန် setting များ
size (ဒဗလျူ * H * D)
က x 200mm 170 × 100
(6.7 "x 3,94" x 7.9 ")
က x 257mm 280 x ကို 90